विराटनगर, १३ असोज । तेहौं संस्करणको एघारौं खेलमा आज दिल्ली क्यापटिल्स र सनराइजर्स हैदराबाद शेख जायद रंगशालामा आमनेसामने हुँदैछन् । जारी प्रतियोगिता शतप्रतिशत जित निकाल्दै अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको दिल्लीले दुवै खेल हार्दै अंकविहीन बनेको तालिकाको पुछारको टोली हैदराबादको सामना गर्दैछ ।
बलिङ, ब्याटिङ र फिल्डिङमा उत्कृष्ट देखिएको दिल्लीसामु हैदराबादले कस्तो प्रदर्शन गर्ला सबैको चासोको विषय बनेको छ । बलिङ लाइनअप खासै चल्न नसकेको अवस्थामा दिल्लीविरुद्ध हैदराबाद कसरी मैदान उत्रन्छ त्यो हेर्न लायक रहनेछ ।
आजको खेलमा दिल्लीका बलरविरुद्ध वार्नर, बेयरस्टो र पाण्डेले खुलेर खेल्न सक्लान् त ? के हैदराबादले दिल्लीको जितको शृंखलामा पूर्णविराम लगाउला त ? के हैदराबादले आफ्नो खातामा पहिलो दुई अंक जोड्ला त ? हैदराबादविरुद्ध जित निकाल्दै के दिल्लीले जितको ह्याट्रिक गर्न सक्ला त ? यी सबै प्रश्नको जवाफ आजको खेलको नतिजाले पक्कै दिनेछ ।
आजको खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने पक्का छ । पहिलो जितको खोजीमा रहेको हैदरबाद र ह्याट्रिकको खोजीमा रहेको दिल्लीमध्ये जित कसले निकाल्ने हो त्यो त खेलको नतिजाले बताउनेछ तर आजको खेलमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने चार खेलाडीलाई हामीले ‘प्लेयर्स टू वाचको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरेका छौंः
दिल्लीका ओपनिङ दायाँ हाते ब्याट्सम्यान सअले पञ्जाबविरुद्धको पहिलो खेलमा प्रदर्शन गर्न नसके पनि उनले चेन्नईविरुद्धको दोस्रो खेलमा आफ्नो क्षमता देखाइसकेका छन् । पहिलो खेलमा पाँच रनमा नै पेभेलियन फर्किएका सअले दोस्रो खेलमा एक छक्का र नौ चौकाको मद्दतमा ६४ रनको अर्धशतकीय पारी खेलिसकेका छन् ।
सन् २०१८ मा सम्पन्न यू–१९ विश्वकप विजेता टोलीको कप्तानसमेत रहेका सअले २०१८ को आईपीएलबाट प्रतियोगितामा डेब्यू गरेका हुन् । पन्चि ड्राइभ र आक्रामक तरिकाले एरियल सट प्रहार गर्न माहिर सअ आजको खेलमा दिल्लीलाई जित दिलाउन सक्ने खेलाडी हुन् । इलिमिनेटर र प्लेअफ गरी दिल्लीबाट अघिल्लो सिजन १६ खेलेका उनले तीन सय ५३ रन बनाएका थिए ।
कागिसो रबाडा, दिल्ली क्यापिटल्स, बलर
सुपर बल स्पेशियालिस्टका उपनाले चिनिएका रबाडा दिल्लीका मुख्य हतियार हुन् । २०१७ मा डेब्यू गरेर ६ खेलमा ६ विकेट लिँदै आईपीएल यात्रा सुरु गरेका यिनले २०१८ मा भने प्रतियोगिता खेलेनन् । प्रतियोगिता नखेले पनि २०१९ मा उनलाई दिल्लीले ‘रिटेन’ गरेको थियो ।
गत संस्करणको आईपीएलमा दिल्लीको प्लेअफसम्मको यात्रा तय गराउन रबाडाले आफूले खेलेका १२ खेलमा २५ विकेट लिएका थिए । जारी सिजनको पहिलो खेलबाट नै निकै फर्ममा देखिएका रबाडाले दुई खेलमा पाँच विकेट लिइसकेका छन् ।
दिल्लीलाई पञ्जाबविरुद्धको पहिलो खेलमा सुपर ओभरमा जित दिलाउन रबाडाले के एल राहुल र पुरनको विकेट लिएका थिए । चेन्नईविरुद्धको दोस्रो खेलमा फाप डु प्लेसिस, धोनी र जडेजाको विकेट लिएका यिनले आजको खेलमा वार्नर, बेयरस्टो र पाण्डेविरुद्ध कस्तो प्रदर्शन गर्ने हुन् हेर्न बाँकी छ ।
आजको खेलमा पनि यिीले आफ्नो उत्कृष्ट फर्म प्रदर्शन गर्ने हो भने दिल्लीले लगातार तीन जित निकाल्दै प्रतियोगितामा ह्याट्रिक नगर्ला भन्न सकिन्न ।
डेभिड वार्नर, कप्तान, सनराइजर्स हैदराबाद
क्रिकेटको सबैखाले फम्यार्टमा आक्रमक शैलीमा प्रस्तुत हुने वार्नर हैदराबादका कप्तान र ओपनिङ ब्याट्सम्यान समेत हुन् । बैंग्लोरविरुद्ध पहिलो खेलमा ६ रनमा नै आउट भएका वार्नरले दोस्रो खेलमा भने ३६ रन बनाएका थिए ।
हैदराबादले खेलेको दुई खेलमा मनिष पाण्डेबाहेक अन्य खेलाडीको प्रदर्शन गतिलो नहुँदा वार्नरलाई आजको खेलमा उत्कृष्ट प्लेइङ एलेभेन छान्नु पर्ने दबाब छ । विभिन्न प्रतियोगिता र समयमा आफ्नो नेतृत्व गर्नसक्ने र खेल्नसक्ने क्षमता देखाइसकेका वार्नरसामु आजको खेलबाट प्रतियोगितामा दुई अंक जोड्दै पुनरागमन गर्ने मौका छ ।
पाएको मौकाको सदुपयोग वार्नरले कतिको गर्ने हुन् त्यो त आजको खेलको नतिजाले पक्कै देखाउनेछ । अघिल्लो संस्करणको आईपीएलमा सर्वाधिक ६ सय ९२ रन बनाउँदै ‘ओरेन्ज क्याप’ होल्डर बनेका वार्नर आजको खेलको ‘प्लेयर्स टू वाच’ मध्येका एक हुन् ।
जोनी बेयरस्टो, विकेटकिपर ब्याट्सम्यान, सनराइजर्स हैदराबाद
सिजनको पहिलो खेलमा बैंग्लोरविरुद्धको दुई छक्का र ६ चौक्कसहित ६१ रनको अर्धशतकीय पारी खेलेका बेयरस्टो दोस्रो खेलमा भने पाँच रनमा नै पेभेलियन फर्किएका थिए । २०१९ को सिजनबाट आईपीएलमा हैदराबादको टोलीबाट डेब्यू गरेका यिनले पहिलो सिजनमा नै चार सय ४५ रनको योगदान टोलीलाई दिइसकेका छन् ।
तर यस संस्करणको आईपीएलका दुई खेलमा भने यिनको प्रदशर्नमा एकरुपता आउन सकिरहेको छैन । अघिल्लो संस्करणमा आफ्नो आक्रामक शैली प्रदर्शन गरिसकेका बेयरस्टो आजको खेलमा फर्ममा देखिने हो भने हैदराबादलाई पहिलो दुई अंक जोड्न धेरै नै सहज हुने देखिन्छ ।
कप्तान वार्नरसँग आजको खेलमा बेयरस्टोले लामो साझेदारी गर्ने हो भने दिल्लीका लागि यी दुईको जोडी टाउको दुखाइको विषय बन्ने सक्नेछन् ।